:: My Little World ::: Cape Gooseberry
Posted by Nay Nay Naing at 11/20/2009 11:29:00 AM
တောကိုသွားလည်ရင် အဲဒီဘောက်သီးတွေ ခူးစားနေကြ...။ အခွံခြောက်နေတဲ့အသီးက စားလို့ပိုကောင်းတယ်...
My primary school in Mandalay also sold this fruits. They tie5together & sold 0.05P (၅ပြား). This was 30 years ago price.
အဲဒါကိုလေ ရွာမှာ ကုလားခရမ်းချဉ်သီးလို့ခေါ်တယ်
ခြံထဲမှာ အလေ့ကျပေါက်ပေါက်နေလို့ ငယ်ငယ်တုန်းက အမြဲခူးစားဖြစ်တယ်။ မမှည့်ခင်တုန်းက အစိမ်းပဲ.. မှည့်လာရင် အခွံရော အထဲက အသီးရော ဝါသွားတယ်။
လန်ဒန်မှာတော့ စူပါမားကက်ပေါ် တင်ရောင်းနေတာ မြင်ခဲ့ဖူးတယ်း)
ကြံကြံဖန်ဖန်တွေ စားတယ်။ =)
အဲဒါလေးတော့ မြန်မာပြည်မှာ စားဖူးတယ်။ ဒီရောက်တော့ ကိတ်မုန့်ပေါ်မှာ တွေ့တာ အဲဒါမှန်း မသိဘူး။ အခွံချွတ်ထားလို့လေ။
Friday, November 20, 2009 9:11:00 PM
Cape ဆိုလို့ Cape Town တို့ Cape of Good Hope တို့အကြောင်းများ ပြောမလားလို့ ....
Friday, November 20, 2009 10:56:00 PM
Ohh, I miss Baut Thi after reading this post, thanks for sharing. It's very cheap in our Yangon market. Yummy......
Sunday, November 22, 2009 11:07:00 AM
အဲလို အသီးမျိုး မမြင်ဘူးဖူး။ ချစ်စရာလေးပဲ .. စားချင်လိုက်တာ...
Sunday, November 22, 2009 10:27:00 PM
ဘာသီး ခေါ်မှန်းတော့ မသိ... ခုတော့ သိဘီ။ ကျေးဇူးပါပဲ ဗျာ။
မစားရတာကြာလို့ အိပ်မက်ထဲတောင် နတ်ပြည်ထိ တက်ပြီး စားရတယ် ထည့်မက်သေးတာ။
ကိတ်မုန့်တွေပေါ်မှာ တင်ထားတာ တွေ့ပေမဲ့ ဒီမှာ မရောင်းဘူးထင်တာ။ ခုတော့ ရှိမှန်း သိဘီ။